श्रीमती मा’रे’र जे’ल बसेर फर्केको बाबुले १३ वर्षकी छोरीलाई दुई वर्ष देखि…. (भिडियो हेर्नुस्) « गोर्खाली खबर डटकम
श्रीमती मा’रे’र जे’ल बसेर फर्केको बाबुले १३ वर्षकी छोरीलाई दुई वर्ष देखि…. (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । दागंमा फेरी अर्को घटना भएको छ । सामान्य मानिसले कल्पना समेत गर्न नसक्ने घटना एउटा पुरुषले गराएका छन् । आफ्नो पहिलो श्रीमतीको ज्यान लिए । उनले सो घटना प्रमाणीत भएपछि जे ल गए । पछि उनी जे लवाट फर्केर आए । उनले दोस्रो विवाह गरे ।
दोस्रो विवाह गर्दा उनले विवाहित महिला ल्याएका थिए । विवाहित महिलासंग नै विवाह गरेका उनीसंग एउटा छोरी पनि ल्याएकी थिइन् । जे लवाट फर्किएर आएका ति ६२ वर्षका पुरुषले १३ वर्षकी छोरीलाई अनैतिक काम गरेका छन् । यो क्रम दुई वर्ष देखि नै हुँदै आएको थियो । बालिका ११ वर्षको उमेर हुँदा देखि नै ति पुरुषले अनैतिक काम गर्ने गरेको खुलेको छ ।
पहिले नै जे ल जिवन बिताएर फर्किएका ति पुरुषले १३ वर्षकी अबोध बालिकालाई अनैतिक काम गर्ने ति पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झड्केलो बुवाले धेरै समय अघि देखि अनैतिक काम गर्दा पनि बालिकाले कसैलाई भन्न सकिनन् । अहिले ति आमाले आफ्ना श्रीमान विरुद्ध कानुनी कारवाहीको माग गरेकी छन् । छोरीलाई अनैतिक काम गरेको आमाले नै देखे पछि मात्र घटना वाहिर आएको हो ।
ति पुरुषसंग विवाह गरेर आएकी महिलाले आफ्नै छोरी जस्तै माया गर्छ होला भन्ने ठानेकी थिइन् । उनी आफु एक दिन आफन्तको घरमा जाँदा ति छोरी म पनि मामा घर जान्छु भनिन् । तर ति पुरुषले मलाई खाना मिठो हुन्न यो छोरीलाई मामा घर जान दिन्न भन्दै घरमै राखे । छोरीले खाना पकाइन् खुवाईन् अनि राती आराम गर्न विस्तरा लगाउन लाग्दा बुवाले अर्को विस्तरा लगाउन दिएनन् । उनले आफ्नै विस्तरामा छोरीलाई पनि राखे ।
दाङ जिल्लामा १३ बर्षीया बालिका माथि यस्तो घटना भएको हो । बंगलाचुली गाउँपालिका–२ मर्पेस निवासी ति बालिकालाई आफ्नै झ’ट्’केलो बुबाले अनैतिक काम गरेको खुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बालिकाका आफन्तले बुधवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे जानकारी गराएको हो । बालिकाका आफन्तका अनुसार उक्त व्यक्तिले विगत २ बर्षदेखि बालबालिकालाई अनैतिक काम गर्दै आएका थिए ।